Soomaaliya oo Ka Mid Ah 27 Dowladood oo Diinta Islaamka Ay u Tahay Diin Rasmi Ah
Saturday October 07, 2017 - 11:23:10 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Warbixin ay soo saartay hay'ad fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ayaa lagu sheegay in dalka Soomaaliya ayaa ka mid ah 27 dal ee caalamka diinta Islaamka ay u tahay diin rasmi ah.
Cilmi-baaris ay ku sameysay hay’ada Pew Research Centre oo xarunteedu ku taal magaalada Washington 166 dal ayay ku ogaatay in 43 dal oo ka mid ah wadamada caalamka ay dowladahooda si rasmi ah u tahay diin kaliya, halka 40 dal diiman kala duwan laga haysto, balse 106 oo dalka Maraykanku ka mid yahay ayaan lahayn diin la aqoonsan yahay. Sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in toban dal oo ay ka mid yihiin China, Cuba, North Korea, Vietnam iyo dhowr dal oo hore uga mid ahaa wadamadii la isku oran jirey Midowga Soofiyeeti aysan aaminsanayn wax diin ah.
Hay’ada Pew Research Centre ayaa warbixintan daabacday kadib markii ay dhowaan sheegtay in dadka Muslimiinta ah ay ka tiro badnaan doonaan dadka aaminsan diinta Masiixiga ama Kirishtaan 2070ka kuwaasoo 13 dal oo kaliya ay u tahay diin rasmi ah.
Cilmibaarayaashan ayaa waxa ay sheegeen in dadka dunida isaga goosha ama u socdaala ay qeyb ka qaateen in diinta Islaamku ay ku badato wadamo ku yaal Waqooyiga America iyo Yurub.
Pew ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in dadka Muslimiinta ah ay aad ugu badanayaan caalamka sanadkii 2010kiina ay tirada dadka haysta diinta Muslimka ay gaarayeen 1.6billion taasoo ah boqolkiiba 23 tirada dadka dunida ku nool.
Warbixin ay hay’adan hore u soo saartay ayaa lagu sheegay in marka la gaaro 2100 dadka Muslimiinta ah ay boqolkiiba 1 ka badnaan doonaan dadka haysta diinta Masiixiga.
Warbixintan ayaa lagu shaaciyay in dadka Muslimiinta ah ay ka carruur badan yihiin dhammaan dadka haysta diimaha kale,iyadoo celcelis ahaan lagu sheegay in hooyo kasta oo Muslimad ah ay haysato saddex carruur ah halka haweenka kale ee diimaha kale aaminsan ay 2 carruur ah ka haystaan.
"Boqolkiiba 62 Muslimiinta caalamka waxa ay ku nool yihiin gobolada Asia-Pacific iyadoo tiro badan ay ku nool yihiin dalalka Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, Iran iyo Turkey,” ayay cilmi baarayaasha hay’ada Pew sheegeen.
Qubarada cilmi baarista sameysay ayaa waxa kale oo ay qiyaaseen in sanadka 2050 dalka India uu noqon doono wadanka ugu tirada badan leh ee Muslimiinta ay ku nool yihiin iyadoo ay kala wareego doono dalka Indonisia.
Sidoo kale tirada Muslimiinta ku nool wadanka Maraykanka ayaa laba jibaarmi doonta sanadka 2050 sida warbixintan lagu daabacay.
Halkan Hoose ka Aqriso Khariidada wadamada diinta Islaamka ay rasmi u tahay waa kuwa midabka Buluuga ah leh.
Mareykanka Oo Cadeeyey Sababta Ciidamadiisa Uga Howllgalan Soomaaliya.
14/06/2018 - 09:02:42